China KingKong 3 Tattoo Cartridge Mashini Kugadzira uye Fekitori | MOLONG
KingKong 3 Tattoo Cartridge Muchina
ChiGerman chisina mota mota
Kutenderera Yekumhanya: 12V 11000rpm
480 torque hombe
YEMAHARA KUTAURA: Nzira yakanakisa yekutumira zviri pakati nepakati (pamusoro pe100kg) kana kana yako timeline isingakwanise kumirira kutakurwa kwegungwa. Mari yekutakura mweya inoenderana nehuremu uye huwandu. Zvimwe zvinhu zvakaita sefuro zvinotora nzvimbo zhinji asi chakareruka uye zvimwe zvinhu zvakaita sedare zvinorema asi zvinotora nzvimbo diki. Mari chaiyo yekutakura inotora huremu uye huwandu mukufunga. Kazhinji, nguva yekufamba haisisina mazuva gumi ekushanda uye kazhinji mazuva 3-5 chete. (Ndokumbira utarise kuti kutakura nendege kuri kungoendesa kune yako nhandare yendege. Anotakura zvinhu achazoda kubata kubvumidzwa kwetsika uye kutakurwa mukati kuenda kudura rako). Iyo Air Waybill (AWB) ndeyezvinyorwa zvinyorwa zvechibvumirano pakati peEM nemutakuri. Iyo AWB ichaendeswa pamwe nemutoro wemhepo uye inoshanda seyakagamuchira risiti, fomu re invoice, chitupa cheinishuwarenzi, uye gwaro rinodiwa pakubvumidzwa kwetsika.
SEA FREIGHT: Iyo yakanyanya mutengo inoshanda uye huru nzira yekutumira kune epasirese kupinza uye kutengesa mabhizinesi. Tinogona kuronga kutumira kubva kufekitori yedu, kubva pachiteshi chedu chiri padyo shanghai, kuenda kuchiteshi chako chiri padyo, kana nzira yese kuzvivakwa zvako (kusasanganisira mutero nemitero). Tinogona kutumira izere nemidziyo yemidziyo (FCL) kana isingasviki pane izere nemidziyo yemidziyo (LCL). Mitengo ye 40 'mudziyo ingori inosvika 50% kupfuura 20' mudziyo uye iyo 40 "HQ ingangoita iwo mutengo wakafanana ne40" GP mudziyo. Max mutoro unenge matani makumi maviri. Vatengesi vedu vanogona kukuraira iwe nezve matipi ekutumira. Semuenzaniso, kana iwe uri pasi pe8cmb isu tinokuraira iwe kuti ungotumira LCL. Kana iwe uri pamusoro pe15cbm iwe unogona kufunga nezve kutenga zvakawanda kurongedza izere mudziyo sezvo nzira yakachipa zvikuru ichave yekutumira FCL zvakadaro. Huremu hunobhadharirwa huremu / vhoriyamu yeLCL i1 cbm kana 1 tani, saka kune maodha ari pasi pe100kg tinogona kukurudzira kutakura nendege kana kutotumira kutumira.
Kufambisa negungwa kunononoka saka kuronga kwakakodzera kwakakosha. Isu tinokurudzira kuisa odha mwedzi mitatu pamberi. Semuyenzaniso. Kana iwe uchida kuti zvinhu zvako zvigadzirire mwaka weKisimusi, iwe zvirinani kuisa odha yako muna Nyamavhuvhu kana kunyangwe pakutanga. Iwe unogona zvakare kupatsanura kutumira kwako muzvikamu zviviri: diki muzana nemhepo, zororo negungwa.
Kuchenesa uye kutora kana kuita kuti odha yako isvitswe kunogona kuitwa nemutengi kana mutengesi broker. Iwe unozogona kuitisa faira yekupinda magwaro kutsika, kuronga kubhadharwa kwechero mabasa, mutero uye imwe mari. Zvichienderana nenyika, inogona kunyengera; saka tinokurudzira kushandisa vatengesi vetsika kuti tibatsirwe. Isu tinokupa iwe Bill reLading, Invoice, Chitupa Chekutanga, uye Rongedza Zvinyorwa. Nguva dzose tarisa kuti uve nechokwadi chekuti ruzivo rwakazara uye rwakarurama uye ugozvitumira kune wako mutengesi broker nekukurumidza sezvazvinogona.
Pashure: Hurricane White Plastiki Inoraswa Mazano
Zvadaro: Tattoo Inogadziriswa Hurefu Neruoko Zororo Rakamira
HELLO II Lithium Bhatiri Tattoo Pen
5PCS & 3PCS kuboora Forceps Tattoo Pierci ...
Mheni II Lithium Battery Tattoo Pen
Blank Permanent Makeup Kudzidzisa Ganda 290 * 195 * 3M ...
1pc Tattoo Bead Bhora Grabber 4 nzwara Stainless S ...